admin – Page 276 – Shabakadda Amiirnuur
Askari Ka Tirsan Ciidamada DF oo Lagu Dilay Heliwaa.
Jimco, November, 03, 2017 rag hubeysan oo loo maleynayo iney ka tirsan yihiin Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar gaadmo ah ku dilay askari ka tirsan ciidamada DF oo ka hawl galayay degmada Heliwaa ee magaalada Muqdisho. Ilo wareedyo ayaa inoo sheegay in markii askariga la toogtay kadib laga qaatay qorigii […]
Maqaallo Maxaa Cusub Wararka Dibadda Wararka Gudaha
Cinwaanka Twitter-ka Ee Donald Trump oo Hawada Laga Saaray.
Cinwaanka uu barta Twitter-ka ku leeyahay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa la xaqiijiyay in hawada laga saaray shalay oo Khamiis ahayd sida ay xaqiijisay shirkada leh bartan xiriirka bulshada ah. Shaqaalaha xafiiska madaxweyne Trump ayaa sheegay in muddo kooban oo uu xirnaa cinwaankan kadib hawada lagu soo celiyay iyagoo timaamay in […]
Aflaam Maqaallo Maxaa Cusub Wararka Gudaha
Laba Gaari oo Ciidamada Shisheeye Looga Gubay Dagaal Ka Dhacay Sh/hoose.
Dagaalyahanno hubeysan oo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ciidamada Amisom ayaa duhurnimadii maanta isku fara saaray inta u dhacaysa magaalada Marko iyo degaanka Nambar 60 ee gobolka Shabeelaha hoose. Sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, dirirta ayaa timid kadib markii askarta Al-Shabaab ay dhabbaha u galeen […]
« Previous 1 … 274 275 276 277 Next »